Nchịkwa aha njikwa maka ọrịre | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Nchịkwa Franchises
Otu njikwa njikwa aha njikwa
Franchises Njikwa ọhụrụ
Ngwa nhọrọ Matchise
E guzobere Schoolslọ Akwụkwọ Ihe Ralọ ihe nkiri nke Razzamataz na 2000 ma na-enye ọzụzụ pụrụ iche n'ịgba egwu, ihe nkiri na ịbụ abụ ọnụ na ohere ndị na-atọ ụtọ ...
Gịnị bụ njikwa Franchises
Nlekọta njikwa bụ ụlọ ọrụ ebe franchisee (onye nwe azụmaahịa na ókèala ha dị iche iche) na-ahazi ọrụ na azụmaahịa ya na ndị ọrụ ya, karịa ịrụ ọrụ ụbọchị.
Otu njikwa ga - ejikwa ọtụtụ ndị ọrụ, ebe franchisee ga - ejikwa ndị ọrụ a yana ọrụ azụmaahịa ndị ọzọ dị mkpa site n'isi ụlọ ọrụ ha ma ọ bụ n'ụlọ ha.
Kedu njikwa aha njikwa dị?
Nchịkwa aha njikwa abụghị ụlọ ọrụ franchise. Kama nke ahụ, njikwa bụ ụdị otu esi arụ ọrụ nke aha franchise, ma kpuchie ọtụtụ ụlọ ọrụ franchise. Ndị a bụ ihe atụ ole na ole nchịkwa franchise…
Ugbo Franchise - necessarilykwesighi ikwesiri iji aka ị nweta ahihia obula. Na ọnọdụ a, ị ga - arụ ọrụ site na ụlọ ma ọ bụ ọfịs, na - elekọta ịdịmma nke ndị ọrụ gị ma na - akwalite franchise gị site na ọwa ahịa dị iche iche. Ndi otu aka gị ga-anọ na vangbọ a na-akọ ugbo.
Nhicha Franchises - franchises dị ka Oge Maka mean pụtara na ị nwere ike ihicha ụlọ ma ọ bụ ọfịs n'enweghị ahapụ ụlọ gị! Dịka nhicha nhicha nhicha Franchise, ị ga - eji otu ndị na - ehicha ụlọ na nhicha ụlọ na ọfịs, ma ọ bụ ọrụ ọ bụla achọrọ, ebe ị na - elekọta ndị ọrụ nhicha gị.
Nweta Uru Nchịkwa Franchise
Otu n'ime uru dị mkpa iji rụọ ọrụ nchịkwa bụ, dabere na franchise, ị nwere ike ịgaghị enwe ahụmịhe ọ bụla na ngalaba ahụ. Dịka ọmụmaatụ - ị na-eji aha ụlọ ọrụ nlekọta nke a na-arụ ọrụ dị ka azụmaahịa njikwa franchise - ịgaghị enwe ahụmịhe ọ bụla na nlekọta ma ọ bụ mpaghara ahụike. Ihe franchisor ga-achọ, ga-abụ ikike nchịkwa siri ike na otu na-arụ ọrụ ọfụma. Ọ bụrụ na ị nwere ike ijikwa azụmaahịa na otu ndị mmadụ n'ụzọ dị irè, mgbe ahụ ị na-agalarị ịbụ ezigbo franchisee maka njikwa njikwa.
Otu uru dị na ịgba franchise bụ na ị na-azụ ahịa maka onwe gị, mana ọbụghị n'onwe gị. Mgbe ị itinye ego na njikwa njikwa, ị ga-enweta ọzụzụ na nkwado niile ịchọrọ iji bido ịmalite njem. Nke a na-agụnyekarị akara, ntanetị saịtị, ntinye ụlọ (ọ bụrụ na ọdabara), uwe ndị ọrụ, yana ndị ọzọ
Chọta usoro njikwa Franchise zuru ezu na Franchiseek.